Iyo yemhepo inobata yuniti inoshanda padhuze nechaitonhodza uye kutonhodza shongwe kuitira kutenderera uye kuchengetedza mweya kuburikidza neiyi nzira yekupisa, kufefetedza, uye kutonhora kana kutonhodza mweya. Anobata mweya pane yekutengesa chinhu bhokisi hombe iro rinoumbwa nemidziyo yekupisa uye yekutonhodza, blower, racks, makamuri, uye zvimwe zvikamu zvinobatsira anobata mweya kuita basa rayo. Anobata mweya akabatana nemubato uye mweya unopfuura nepakati kubva pamhepo inobata yuniti kuenda kune iyo ductwork, uye wozodzokera kune inobata mweya.
Zvese izvi zvinhu zvinoshanda pamwechete zvichienderana nehukuru uye marongero echivako. Kana chivakwa chacho chakakura, chando chakawanda uye shongwe dzinotonhora dzinogona kudikanwa, uye panogona kuve nekudikanwa kweiyo yakatsaurwa sisitimu yeiyo server kamuri kuitira kuti chivakwa chiwane mhepo inokwana kana ichidikanwa.
Iyo AHU ine mashandiro emhepo kutonhodza nemhepo kune mhepo kupisa kupisa kupora. Slim uye compact chimiro ine inochinjika nzira yekuisa. Iyo inoderedza zvakanyanya mutengo wekuvaka uye nekuvandudza mashandisiro enzvimbo yenzvimbo.
Iyo AHU yakagadzirirwa ine inonzwisisika kana enthalpy ndiro kupisa kupisa kupora. Kupisa kwekupisa kupisa kunogona kuve kwakakwirira kupfuura 60%
25mm pani yemhando yakasanganiswa sisitimu, yakakwana kumisa kutonhora bhiriji uye nekuwedzera kusimba kwechikwata.
Kaviri-ganda sandwiched pani ine yakakwira density PU furo yekudzivirira inotonhora bhiriji.
Kuchenesa / kutonhora ma coils akagadzirwa ne hydrophilic uye anti-corrosive coated aluminium fins, zvinobudirira kubvisa "mvura bhiriji" pane mukaha wefaini, uye inoderedza kufefetedza kuramba uye ruzha pamwe nesimba simba kushandiswa, iko kupisa kwekushisa kunogona kuwedzerwa ne5% .
Iyo yuniti inoshandisa yakasarudzika yakapetwa kaviri beveled mvura yekugeza pani kuti ive nemvura yakanyoroveswa mukati iyo iyo inopisa exchanger (inonzwisisika kupisa) uye coil kubuda zvachose.
Tora yakanyanya kushanda yekunze rotor fan, iri yakaderera ruzha, yakakwira static kumanikidza, kumeso mashandiro uye kudzikisa mari yekuchengetedza.
Iwo ekunze mapaneru yeyuniti akagadziriswa nenylon inotungamira screws, zvakanyatso gadzirisa iyo inotonhora bhiriji, zvichiita kuti zvive nyore kuchengetedza uye kuongorora munzvimbo ine muganho.
Yakashongedzerwa neyakajairwa dhirowa-kunze mafirita, ichideredza yekuchengetedza nzvimbo uye mutengo.